Dowladda Soomaliya oo sheegtay in Ajaanib ka tirsan Al-Shabaab ay qarax ku dhinteen - Awdinle Online
Home News Dowladda Soomaliya oo sheegtay in Ajaanib ka tirsan Al-Shabaab ay qarax ku...
Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab oo isugu jira Soomaali iyo Ajanib ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen qarax ay farsameeynayay tuulada Aala-fuutow ee dhinaca galbeed qiyaastii 65-kiilo-mitir kaxigta degmada Qoryooleey ee gobolka Shabeellaha hoose.
Sida ay baahisay idaacadda Codka Ciidamada Qalabka sida qaraxa ayaa ka dhex-dhacay Xarun ay qaraxa Al-Shabaab ku farsameeynayeen, sida Miinooyinka dhulka lagu Aaso iyo jaakadaha qaraxyada, isla markaana ay qaraxaasi ku dhinteen 61 Xubnood oo siugu jira Soomaali iyo Ajaanib kana tirsanaayeen Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaa la sheegay in xaruntaasi qaraxyada lagu farsameeynayay ay kusugnaayeen Saraakiil u badan Ajaanib, sidoo kalena qaraxa ay ku geeriyoodeen Hooyo iyo Cunugeeda oo Guriga qaraxa uu ka dhacay ka agdhawaa sida ay Idaacadda Ciidamadda Qalabka Sida u sheegeen Saraakiil katirsan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Warar hordhac ah oo kasoo baxaya qaraxaasi kadhacay xaruntii qaraxyada gobolka Shabeelaha hoose Al-shabaab kulahaayeen tuulada Aala-fuutow oo hoostaga qoryooleey ayaa sheegay in Saraakiisha qarxaasi kugeeriyooday uu kamid yahay Axmed Shariif (Abuu Bilaal) oo kasoo jeeda dalka Agaanistaan oo Al-shabaab u qaabilsanaa farsamooyinka gaadiidka qaraxyada ay u isticmaalan iyo khaalid kaasi oo dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Yemen.
Previous articleJubbaland oo cambaareysay dueyntii Ciidanka Kenya ka geysteen Gobolka Gedo
Next articleXOG: Ra’iisul Wasaare Rooble oo amray in dib loo so celiyo xiriirkii Imaaraadka Carabta